Nhau - Simbisa simba remukati uye woisa chikepe - Shandong Gaoqiang akabudirira kubata musangano wekudzidzisa wehunyanzvi
SNF mvura yekudzikisa mumiriri
SNF (Naphthalene based) yekuderedza mvura mumiririri inowanzo kunzi β-Naphthalene Sulphonate Formaldehyde Condensate (zita pfupi: SNF, PNS, NSF, nezvimwe…). Iyo ndiyo hombe uye inonyanya kushandiswa mvura kudzora mumiririri muChina parizvino (≥ 70%). Inoonekwa nekukwirisa kwemvura kudzikisira mwero (15% - 25%), hapana kupinza mweya, kushomeka pakuisa nguva, ingangoita yakanaka simende, kushandiswa kwakabatana nezvimwe zvinowedzera uye nemutengo wakaderera. SNF inowanzoshandiswa kugadzirira yakakwirira fluidity, yakakwirira simba uye yakakwirira kuita kongiri. Kudonhedza kurasikirwa kwekongiri nekuwedzera kuri nyore kweSNF kunokurumidza. Uye zvakare, iyo SNF inochinja kune imwe samende inoda kuvandudzwa.
Mukuru maneja Wekambani, Zhu Menshou, pamwe nevashandi vapinda musangano uyu, vakagamuchira nemufaro Dr. Gao. Zhu akataura kuti pasi pekuputika kwedenda, mhando hombe yezvivakwa yakavhurwa, kambani yakaunza mikana-kamwe-mu-yehupenyu yekuvandudza mikana, uye mikana inogara yakachengeterwa avo vakagadzirira. Iyo kambani inofanirwa kushingaira kuongorora bhizinesi modhi hunyanzvi, uye inogara ichivandudza zvigadzirwa uye mamodheru ebasa. Chete nekugara vachidzidza, vachishandisa zvavakadzidza, vachigara vachigadzira zvinokwikwidza, uye nekuvaka zvikwata zvinoshanda, kambani inogona kuramba isingakundike.
Musangano, Dr Gao akagadzira iyo poly carboxylic acid amai doro uye hunoshanda hunhu hunhu uye kugoverwa kwekutonga maitiro, hunyanzvi hwedzidzo, yakatsanangura PCE yeiyo amai doro nehunhu hwekugovera zvinhu uye mukomboni nezvakatariswa, PCE nezvayo zvinoshanda zvikamu. pane zvivakwa zvekongiri murau, kusanganiswa mune zvekushandisa zvekongiri kazhinji ruzivo rwakadai sematambudziko nematanho, uye zvichisanganiswa neiyo chaiyo kesi yeinjiniya yehunyanzvi hwetekinoroji yakaenderera netsananguro yakadzama. Pakupedzisira, muchikamu chinopindirana chesaiti, Dr Gao vakapindura mibvunzo yakamutswa nevashandi veDhipatimendi reKushambadzira uye nedhipatimendi rehunyanzvi mumwe neumwe, vachipa mazano anoshanda kune akakosha uye akaoma matambudziko akasangana nevashambadzi nevashandi vehunyanzvi. munzvimbo yeprojekti.
Kubudikidza nekudzidziswa uku, vashandi vakati vakabatsirwa zvikuru: vashandi vekambani vehunyanzvi uye vashandi vekutengesa vakawedzera kugona hunhu hwe polycarboxylate amai doro uye zvinhu zvaro zvinoshanda pamwe neruzivo rwekufungidzira uye hunyanzvi hwekushanda kwekuwedzera tekinoroji yekudzora, uye zvakare zvakapihwa. dzidziso yekutsigira kambani mukushandisa kweyekuwedzera tekinoroji uye mushure mekutengesa sevhisi.
"Tsvaga maitiro akajairika, kuvaka nheyo yakasimba uye kuhwina ramangwana". Nheyo huru inounza marongero akanaka emabhizinesi, asi iyo kambani inongogona kuramba isingakundike kana ikaita hunyanzvi hwemukati mechikwata, ichienderera ichiona zvigadzirwa, inovandudza danho rebasa, uye inosangana nezvinodiwa nevatengi. Iko hakuna mugumo pakudzidza uye kurwira, asi ita zvinhu zvakanaka, usabvunze ramangwana, iro ramangwana rekambani ye gao Qiang inogona kutarisirwa!